काठमाडौका यी ठाउँ जहाँ पुरुष खोज्न स्कुटर चढेर आउँछन् युवती – Sandes Post
April 12, 2022 2866
जधानीवासी दिउँसो समयमा धुलो, धुँवा र ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या झेलिरहेका छन्। काठमाडौंको रात्रिकालीन अवस्था पनि वि’कृतिजन्य क्रियाकलापले भरिएको छ। शुक्रबार राति काठमाडौंलाई नियाँल्दा विभिन्न प्रकारका वि कृतिको चाङ फेला पारेको छ । निगरानीका क्रममा भेटिएको यस्तो संवादले नै पुष्टि गर्छ, राजधानीमा रात्रिकालीन समयमा हुने वि कृतिजन्य कार्य ‘जाने हो?’ स्कुटर घ्याच्च रोकियो ।
जो कोहीलाई पनि प्रभावमा पार्ने जिउडाल, अ र्धन ग्न पहिरन र आग्रहले एकैछिन अलमलमा पाथ्र्यो । एकछिन बार्गेनिङ भयो र एक ग्राहक तिनै युवतीको स्कुटरमा चढे र लागे ह्याप्पी फ्राइडे मनाउन । रातको १० बजेको छ । ठमेल आसपास धेरै यौ न कर्मी महिला र तेस्रो लिं गी सलबलाउन थालिसकेका छन् ।
डान्स बार, पव, डिस्को र दोहोरीमा विदेशीभन्दा नेपाली युवायुवतीकै चहलपहल बढी देखिन्छ । झन्डै रातभरजस्तो डान्स बार, पव, डिस्को र दोहोरीभित्र रंगिन संसारमा मस्त बन्ने ठमेल सुस्ताउँदै जाँदा बाहिर अर्को माहोल बनिसक्छ।
प्रहरीले यसबारे जनगुनासो बढेपछि छुट्टै योजना अ परेसन नै चलाएर रात्रिकालीन व्यवसायमा बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाइने र यस्ता मनोरञ्जनका नाममा प्रवेशमा कडाइ गरेको थियो । यस्तो भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही हुने तथा किशोर किशोरीलाई नियन्त्रणमा लिई सचेत गराउने तथा अभिभावकको जिम्मा लगाउने गरिएको छ।
कोही नयाँ देख्नेबित्तिकै उनीहरू नजिक पुग्छन् र टाँसिँदै बार्गेनिङ सुरु गरिहाल्छन् ररत्नपार्क- दाइ जाने हो? कति ? १३०० होल नाइटको ५००० रुम यसैमा : रत्नपार्क आसपास राती ९ बजे कानमा ठोकिएको आवाज हो यो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलगायत रत्नपार्क क्षेत्रमा यसैगरी बार्गेनिङ चलिरहेका छन् अर्थात् जवानीको मोलतोल यसरी नै भइरहेछन्। यौ नकर्मी महिला तथा तेस्रो लिं’गीको बिगबिगी छ । कोही नयाँ देख्नेबित्तिकै उनीहरू नजिक पुग्छन् र टाँसिँदै बार्गेनिङ सुरु गरिहाल्छन् । केही असहज जवाफ आउनेबित्तिकै गाली गर्न थाल्छन्।
काठमाडौंको रात्रिकालीन समयलाई लिएर अनेक चर्चा परिचर्चा चल्ने गरेका छन् । विशेषगरी यौ नकर्म र अ प राधले भरिएको राजधानीको रात्रिकालीन समय पछिल्लो समय मनोरञ्जनको माध्यम बन्न पुगेको छ। भीआईपीको दबदबा रहेको दरबारमार्ग क्षेत्र, बसपार्क, चाबहिललगायतका स्थानका रात्रिकालीन व्यवसायसमेत अधिकांश नेपाली युवायुवतीले नै धानेको देखिन्छ ।
दरबारमार्ग, ठमेलको सञ्चयकोष क्षेत्र, नसिङचोक ज्याठा तथा रत्नपार्क आसपास क्षेत्रमा रातिको समयमा तेस्रो लिं गी तथा यौ नकर्मी महिलाको बिगबिगी हुने गरेको छ । एकैछिन फुटपाथ वा त्यस क्षेत्रमा कोही उभिनु मात्रै पर्छ, यस्ता धेरै अफर आइपुग्छन्। यौ कर्मीहरूले स्कुटी लिएर विभिन्न होटल, अर्पाटमेन्ट र डेरामा पुर्याएर ध न्दा चलाउने गरेको देखिएको छ ।
Prevमलेसियाको Volvo Sdn ले बेसिक तलब १८ सय दिने, नेपाली कामदारको ठूलो माग
Nextबढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
किन लिइनन् पूजाले ‘ए मेरो हजुर ४’ को नाम ? के फेरी चिप्लिएकी हुन् पूजा ?
कमेडियन एलिस राईको अभिनयको चर्चा, एलिसको यो भिडियोले धेरैको मन जित्यो(भिडियो हेर्नुहोस्)
बस ड्राइभरका छोरा हुन् साउथ इण्डस्ट्रीकै महंगो अभिनेता ‘यश’